Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.2 Big tahirin-kevitra
Big tahirin-kevitra dia nohariana sy nangonin'ny governemanta ho an'ny tanjona hafa ankoatra ny fikarohana. Mampiasa izany ho an'ny fikarohana tahirin-kevitra, noho izany, mitaky repurposing.
Ny filamatra jerena ny fiaraha-monina mihevitra ny mpahay siansa fikarohana manana hevitra iray, ary avy eo fanangonana tahirin-kevitra mba hizaha toetra ny hevitra. Ity fomba iray mitarika ho amin'ny fikarohana mafy fanontaniana mendrika eo amin'ny fikarohana sy ny tahirin-kevitra, nefa voafetra satria ny olona iray mpikaroka matetika dia tsy manana ny loharanon-karena ilaina mba hanangona ny angon-drakitra ilaina, toy ny lehibe, manan-karena, ary ny firenena-solontenan'ny angona. Noho izany, be dia be ny fikarohana ara-tsosialy tamin'ny lasa dia nampiasa goavana fanadihadiana ara-tsosialy, toy ny General Social Survey (GSS), ny American National fifidianana Fianarana (ânes), ary Panel Fianarana ny Vola Miditra fanetsiketsehana (PSID). Ireo goavana fanadihadiana dia mihazakazaka amin'ny ankapobeny amin'ny alalan'ny ekipa ny mpikaroka ka dia natao mba hamoronana tahirin-kevitra azo ampiasaina maro mpikaroka. Noho ny tanjona ireo fanadihadiana goavana, fikarakarana lehibe no nataony tao nanaovany ny fanangonana antontan'isa sy ny fanomanana ny vokatr'izany tahiry ho an'ny fampiasana ny mpikaroka. Ireo antontan-kevitra ireo ny mpikaroka sy ny mpikaroka.
Fikarohana ara-tsosialy ny ankamaroan'ny taona nomerika mampiasa loharanom-baovao, na izany aza, dia samy hafa ifotony. Fa tsy amin'ny fampiasana ny angon-drakitra nangonina mpikaroka sy ny mpikaroka, dia mampiasa tahirin-kevitra loharanom-baovao izay noforonina ary nangonina ny raharaham-barotra sy ny fitondram-panjakana araka izay mahamety azy toy ny manao ny tombony, manome ny asa fanompoana, na ny fitantanana ny lalàna. Ireo raharaham-barotra sy ny loharanom-baovao Government Data no tonga mba hatao hoe lehibe angona. Fanaovana fikarohana amin'ny angon-drakitra lehibe dia hafa noho ny manao fikarohana amin'ny tahirin-kevitra tany am-boalohany izay natao ho an'ny fikarohana. Ampitahao, ohatra, ny vohikala media sosialy, toy ny Twitter, miaraka amin'ny hevi-bahoaka fanadihadiana nentim-paharazana toy ny General Social Survey (GSS). Twitter Ny tena tanjona dia ny hanome ny fanompoana ho amin'ny mpampiasa sy ny ho matiantoka. Ao amin'ny dingan'ny fanatanterahana ireo tanjona ireo, Twitter miteraka tahirin-kevitra izay mety ho mahasoa ny fianarana ny lafiny sasany ny hevi-bahoaka. Kanefa, tsy toy ny Jeneraly Social Survey (GSS), Twitter dia tsy tena mifantoka amin'ny fikarohana ara-tsosialy.
Ny teny hoe tahirin-kevitra lehibe no frustratingly manjavozavo, ary ireo vondrona maro samy hafa avokoa ny zavatra. Fa ny tanjona ny fiaraha-monina fikarohana, Heveriko fa mahasoa ny hanavaka roa karazana angon-drakitra lehibe loharanom-baovao: governemanta sy ny raharaham-barotra panjakana rakitsoratra-panjakana firaketana. Governemanta panjakana rakitsoratra dia tahirin-kevitra izay namorona ny governemanta ao anatin'ny asa ny mahazatra. Ireo karazana firaketana no ampiasain'ny mpikaroka tamin'ny lasa, toy ny mianatra demographers teraka, fanambadiana, ary ny fahafatesana rakitsoratra-fa ny governemanta dia miha-nanangona sy hanafaka tsipiriany firaketana amin'ny analyzable teny. , Ohatra, ny New York City governemanta nametraka dizitaly metatra fiarakaretsaka ao anatiny ny rehetra tao an-tanàna. Ireo metatra-tsoratra isan-karazany ny angon-drakitra momba ny tsirairay mitaingina fiarakaretsaka anisan'izany ny mpamily, ny fanombohan'ny fotoana sy ny toerana, ny fotoana sy ny toerana fijanonana, sy ny saran-dàlana. Ao amin'ny fanadihadiana fa hilaza aho tatỳ aoriana ato amin'ity toko ity, Henry Farber (2015) repurposed Ireo antontan-kevitra mba hiatrehana ny fototra adihevitra raha miteraka toe-karena momba ny fifandraisana misy eo isan'ora karama sy ny isan'ny ora niasa.
Ny faharoa lehibe ny lehibe karazana tahirin-kevitra ho an'ny fikarohana ara-tsosialy dia raharaham-barotra panjakana rakitsoratra. Ireo tahirin-kevitra fa ny raharaham-barotra mamorona sy manangona ao anatin'ny asa ny mahazatra. Ireo raharaham-barotra firaketana panjakana matetika antsoina hoe nomerika soritra, dia ahitana zavatra toy ny mili QUERY hazo, haino aman-jery sosialy lahatsoratra, ary miantso firaketana an-tsoratra avy amin'ny finday. Manakiana, raharaham-barotra ireo rakitsoratra-panjakana dia tsy momba ny fitondran-tena amin'ny aterineto. Ohatra, toeram-pivarotana izay mampiasa jereo-avy skanera dia mamorona tena-potoana fepetra ny mpiasa mamokatra. Ao amin'ny fanadihadiana izay aho hitantara aminareo ny momba aoriana ato amin'ity toko ity, Alexandre Mas sy Enrico Moretti (2009) repurposed fivarotana lehibe io jereo-avy tahirin-kevitra hianatra ny fomba ny mpiasa no fiantraikany amin'ny vokatra ny mamokatra ny tanora mitovy aminy.
Rehefa roa ireo ohatra, ny hevitra ny repurposing dia fototra ny fianarana avy amin'ny tahirin-kevitra lehibe. Raha ny zava-nitranga, ara-tsosialy sy ny angon-drakitra mpahay siansa ny mpahay siansa manatona izany repurposing tena hafa. Mpahay siansa ara-tsosialy, izay zatra miara-miasa amin'ny angon-drakitra natao ho an'ny fikarohana, ireo dia manamarika faingana ny olana miaraka amin'ny angon-drakitra repurposed raha tsy miraharaha ny tanjaka. Etsy an-danin'izany, angon-drakitra mpahay siansa ireo dia manamarika faingana ny soa azo avy amin'ny tahirin-kevitra repurposed raha tsy miraharaha ny fahalemeny. Ho azy, ny fomba tsara indrindra mety ho mifangaro. Izany hoe, ny mpikaroka mila mahatakatra ny toetra ireo loharanom vaovao ny tahirin-kevitra, na ny tsara sy ny ratsy, ary avy eo dia mahatakatra ny fomba fianaran-javatra avy amin'izy ireo. Ary, izany hoe ny drafitra ho an'ny ny sisa amin'ity toko ity. Manaraka, dia mamaritra folo toetra mahazatra ny fandraharahana sy ny governemanta angona-panjakana. Ary rehefa afaka izany, dia mamaritra telo fikarohana izay fomba azo ampiasaina amin'ny tahirin-kevitra ireo, fomba fijery izay tsara mifanaraka amin'ny toetra io angon-drakitra.